Vokatry ny ranobe : tafakatra 4 no maty, atahorana ny valanaretina | NewsMada
Vokatry ny ranobe : tafakatra 4 no maty, atahorana ny valanaretina
Mampanahy ny mety hisian’ny valanaretina any amin’ny tapany avaratry ny Nosy raha ny tatitry ny BNGRC. Tsy misy ny rano fisotro madio ho an’ny mponina. Atahorana ny aretin-kibo sy ny fivalanana vokatry ny fotaka sy ny rano miandrona.
Heverina ihany koa ny hahamafy ny tsy fanjarian-tsakafo satria dibo-drano avokoa ny fambolena izay nandrandraina rehetra any an-toerana. Tsy misy hosarangotina ny mponina. Rava ny trano, dibo-drano ny entana, potika ny fitaovam-pianaran’ny mpianatra, tsy azo ianarana ny sekoly….
Raha ny tarehimarika farany, tafakatra efatra ny maty ary 26. 897 ireo traboina any avaratra any. Maherin’ny 25.000 ha ihany koa ny tanimbary tondraky ny rano ary mahatratra 4.000 ha ny fambolena ravarava tanteraka.
Raha ny fanazavan’ny mpamantatra ny toetr’andro, mitohy ny orana ny an-toerana. Hihamafy izany manomboka rahampitso sy amin’ny faran’ny herinandro ka mila mitandrina ny rehetra indrindra ireo mpiandriaka.